यहि समाजको गर्भवाट जन्मियो नयाँ शक्ति – Akhabar Dainik
यहि समाजको गर्भवाट जन्मियो नयाँ शक्ति
डा.वावुराम भट्टराईलाई पनि वुर्जुवा भनेर घृणा गर्न मात्र कार्यकर्ताहरुलाई सिकाइयो, वौद्धिक जनशक्तिलाई कम्युनिष्टहरुले सधँै वुर्जुवा भनेर घृणा मात्र गरे । उनीहरुको ज्ञान शीप र कलाको प्रयोग गरेर राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने मनन् कहिले पनि गरेनन् ।
डा.वावुराम भट्टराईलाई पनि वुर्जुवा भनेर घृणा गर्न मात्र कार्यकर्ताहरुलाई सिकाइयो, वौद्धिक जनशक्तिलाई कम्युनिष्टहरुले सधै वुर्जुवा भनेर घृणा मात्र गरे । उनीहरुको ज्ञान शीप र कलाको प्रयोग गरेर राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने मनन् कहिले पनि गरेनन् ।
डा. वावुराम भट्टराइले सुरु गरेको नयाँ शक्तिले साँगठनिक स्वरुप ग्रहण गरेको छ । यद्यपी पार्टीको आकार भने एक प्रतिनिधि सभाको चुनाव पार गरे पछि मात्र निर्धारण हुने छ । सागठनिक स्वरुप पनि वास्तविक रुपमा भने महाधिवेसन पछि मात्र देखिने छ । तर गत जेष्ठ अन्तिममा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय भेलाले अन्तरिम साँगठनिक संरचनामा खास्सै परिवर्तन नगरे पनि भेलाले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गरि भेला पछि असार १२, १३ र १४ मा वसेको सचिवालय वैठकले धेरै हदै सम्म परिवर्तन गरेको छ ।
वैठक वाटै केन्द्रीय कार्य समिति गठन गरको छ भने विभागहरुको पनि पुर्नगठन गरेको छ । प्रदेश संयोजकहरु परिवर्तन भएका छन् भने केन्द्रीय सह संयोजकहरु पनि चयन भएका छन् । प्रदेश र जिल्ला समितिहरु व्यवस्थि हुँदै गएका छन् । विस्तारै नयाँ शक्तिले अन्तरिम काल पार गरको छ । नौ महिने गर्भावस्था पार गरेर वच्चा जन्मे जस्तै झण्डै नौ महिने अन्तरिम काल पार गरेर नयाँ शक्ति नेपाल दशरथ रंगशालामा दुनियाँ माझ प्रकट भएको छ । यतिबेला यो दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर वामे सर्देै अगाडि वढेको छ । तर यो पार्टी जन्मदै गर्दा पुरानो पार्टीका नेताहरुले पुरानो पार्टीहरुको पतनको दिन सुरु भएका आफैले स्वीकार गरेका छन् ।
निश्चय पनि नयाँ शक्ति आकासवाट झरेको होइन र जमिन फाटेर निस्केको पनि होइन । यहि समाजको गर्भवाट नयाँशक्तिको जन्म भएको हुँदा सार कुरा नवुझ्दा केहि मान्छेले के कुरा नयाँ भयो र ? भन्ने प्रश्न उठाइरहेका पनि छन् । विभिन्न पार्टीहरु नयाँ शक्तिमा समाहित हुने क्रम चलिरहेको छ । अन्य पर्टी, संगठन र समूह पार्टी परित्याग गरेर नयाँ शत्तिमा प्रवेश गर्ने लहर पनि उत्तिकै चलिरहेकै छ ।
त्यसैले आलोचकहरुले यसलाई सवैतिरवाट आएका मान्छेहरुको खिचडी पार्टी भन्ने पनि गरेका छन् । पुरानै अनुहार र पुरानै मान्छे भएको के नयाँ शक्ति भयो र ? पनि भन्ने गरेको सुनिन्छ । निश्चय पनि नयाँ शक्तिमा राजनैतिक पृष्ठभुमीवाट आएका मान्छेहरु धेरै छन् । कहिले पनि राजनिति नरहेका व्यक्तिहरु पनि नयाँ शक्तिमा लागेका छन् । करिष्मा मानन्धर जो कहिले पनि राजनितिमा थिइनन् , एक चर्चित नायीका मात्रै थिइन, नयाँ शक्तिमा लागिन् । त्यसपछि उनि झन चर्चामा छिन । रामेश्वर खनाल नेपाल सरकारको उच्च पदस्थ कर्मचारी थिए , लामो समय उनी नेपाल सरकारको अर्थ सचिव भए । उनी नयाँ शक्तिमा लागे । उनि पनि चर्चामै छन् ।
यसरी नयाँ शक्तिमा गैर राजनैतिक क्षैत्रवाट आएका विज्ञ विषेषज्ञ तथा व्यक्तित्वहरुको ठुलो समूह नंै छ भन्दा अतियुक्ति नहोलो । यसरी विभिन्न क्षेत्रवाट आएको व्यक्ति व्यक्तित्वहरुलाई नयाँ शक्तिले के जिम्मेवारी दिने र के भुमिका दिने भन्ने लामो छलफल र बहस पछि उनीहरुले आफ्नो बिशेषज्ञता र अनुभवका आधारमा जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । पार्टी प्रवेश गर्ने केहि नयाँ जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई अधिकार र क्षेत्रधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कार्य जारी नैं छ, जुन निरन्तर प्रक्रिया पनि हो ।
अर्कातिर राजनैतिक पृष्ठभुमिवाट आएका व्यक्तिहरुले पनि उचित जिम्वेवारी पाएन भने ऊ पनि असन्तुष्ट वन्न सक्छ र पार्टी नै प्यारालाइसिस हुन सक्छ । विषेषज्ञहरुलाई साँगठनिक जिम्मेवारी ढुंगाको भारी वोकाए जस्तो हुन्छ भने विशुद्ध राजनैतिक कार्यकर्तालाई प्रविधिक काम फलामको चिउरा चपाए जस्तो हुन सक्छ । त्यसैले आ– आ–आफ्नो क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिँदा गोल निर्धारण हुनेमा कसैको दुइमत नरहला । नयाँ शक्ति विशुद्ध राजनितिक पार्टी मात्र होइन । यो त समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष वोकेको नयाँ शक्ति भएकाले यहाँ विशेषज्ञहरुको टोली पनि अति आवस्यक छ । तर विशुद्ध विज्ञहरु मात्र भएर पनि हँुदैन । विज्ञहरुले प्रविधिक विज्ञ, विशेषज्ञ र वौद्धिक जनशक्तिलाई कम्युनिष्टहरुले सधँै वुर्जुवा भनेर घृणा मात्र गरे । उनीहरुको ज्ञान शीप र कलाको प्रयोग गरेर राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने मनन् कहिले पनि गरेनन् ।
माओवादी पार्टीमा रहुन्जेल नयाँ शक्तिको संयोजक डा.वावुराम भट्टराईलाई पनि वुर्जुवा भनेर घृणा गर्न मात्र कार्यकर्ताहरुलाई सिकाइयो । निश्चय पनि सत्ता प्रप्तिको आन्दोलनमा वौद्धिक तप्काको भुमिका पृष्ठभागमा वसेर सहयोग गर्ने नंै हुन्थ्यो । ससस्त्र युद्धमा अग्र भागमा वन्दुक चलाएर लड्ने लडाकुहरु धेरै थिए । तर अव निर्माणको चरणमा प्रवेश गरे पछि त्यस्ता लडाकुको भुमिका गौण भयो ।
तर राष्ट्र निर्माणको यस अभियानमा राजनैतिक कार्यकर्ताको र पूर्व लडाकुहरुको पनि महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ ।
अक्टोवर क्रान्ति पछि लेनिनले वौद्विक वर्गको भुमिकालाई स्वीकार गर्दै वोल्सेविक कार्यकर्ताहरुले मात्र नयाँ रुस वनाउन नसकिने कुरा गरेका थिए । उनले नयाँ रुस निर्माणका लागि वोल्सेविक स्प्रीट र अमेरिकन दक्षता अवस्यक भएको बताएका थिए । त्यसैले उनले वोल्सेकि कार्यकर्ताहरुलाई प्रशिक्षण दिँदै दक्षता हसिल गरेका थिए भने दक्ष हरुलाई लाल बन्न आहन गरेका थिए । उनले लाल र दक्ष टीमले मात्र नयाँ रुस वनाउन सकिने औँल्याएका थिए । लेनिनको त्यहि दृटिकोणका आधारमा नै सोभियत रुसको तिव्र आर्थिक विकास भएर अमेरिका सँग प्रतिस्पर्धा गर्न सफल भएको थियो ।
कपिय सन्दर्भहरु फरक भए पनि सन १९१७ पछिको रुसको जस्तै अवस्थामा अहिले हाम्रो नेपाल रहेको छ । अव हामी पनि छोटो समयमा तिव्र आर्थिक विकास गर्न खोजिरहेका छौँ । तसर्थ नयाँ शक्तिमा लागेको विभिन्न क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका विज्ञ विशेषज्ञहरुले वामपन्थि स्प्रीट पक्रनु जरुरी छ भने राजनैतिक क्षत्रवाट आएको व्यक्ति व्यक्तित्वहरुले दक्षता हसिल गर्दै अगाडि वढ्न जरुरी छ ।
पढेलेखेका वौद्विक वर्गलाई वुर्जवा भनेर घृणा गर्ने कम्युनिष्ट दृष्टिकोण नयाँ शक्तिले परिवर्तन गर्नु पर्छ भने किसान मजदुरलाई गवार, अनपढ र मुर्ख ठान्ने साँच्चैको वुर्जुवा वर्गको दृष्टिकोण पनि सच्याउन पर्छ । नयाँ शक्ति आफुमात्र नयाँ वनेर पुग्दैन । सिंगो समाज र मुलुकलाइ नै नयाँ वनाउनुपर्ने भएकाले यो भुमिका निक्कै गहन छ ।
डा.राजेन्द्र केसि, डा. केशवमान शाक्य, डा.प्रविण मिश्र, डा.प्रदिपमान तुलाचन ,डा. योगि विकासनन्द डा. नत्थु प्र चौधरी इ. मदन राई , नारयण राज पाण्डे , कलाकार अशोक शर्मा, अभिनेता सरोज खनाल , गणेश राई जस्ता लव्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरुको टीम नयाँ शक्तिमा देखेर विपक्षि राजनैतिक दलका नेताहरु अचम्मीत भएका त छँदैछ । नेपाली जनतालाई आसा र भरोसा पनि वनेको छ ।
अव गैर राजनैतिक क्षेत्रवाट नयाँ शक्तिमा लागेका व्यक्तित्वहरुलाई उसको अफ्नै क्षत्रमा भुमिका दिएर कृयाशील वनाउन सकेको खण्डमा नयाँ शक्तिले अवस्य पनि समृद्धिको नेतृत्वगर्न सक्छ । यो शक्तिल पनि समृद्ध नेपालको नेतृत्वगर्न सकेन भने अरु कसैले सक्दैन । दत्त चित्त भएर लागौँ । समृद्धि सम्भव छ हाम्रो आफ्नै जीवनकालमा